Microsoft Teams Kubatanidzwa Google Ads
clever ads Pinda MS Teams
Pinda MS Teams
Microsoft Teams Kubatanidzwa Google Ads , Microsoft Ads &amp; Facebook Ads
Gamuchira yambiro yetsika zvakananga Microsoft Teams chat.
Ivai calculators akaita zvakananga kushambadza yenyu nyaya.
Purogiramu kugamuchira metrics enyu kana zuva kana pavhiki hwaro.
Wedzera Microsoft Teams
Anoponesa nguva yako!
Sevha yako yakakosha nguva nekuona ese akakosha Google Ads , Bing Ads uye Facebook Ads metric munzvimbo imwechete. Vhara mamwe ematebhu!
Ronga yenyu mazuva ose zvakanyanya
Nokubatanidzwa uku, unogona kushandisa metric, mairafu, uye chenjedzo kuti uone kuyenderera mberi kwemishandirapamwe yako, zvese kuburikidza Microsoft Teams !
Clever Ads , kusiyana nemamwe maturusi akafanana pamusika, haidi muripo kuti iwe uishandise.
Sefa ako maakaunzi ads 'maakaunzi uye ugamuchire pfupiso yekuita kuburikidza nemametric uye mairafu.
Kudzora dashboard yako
Svika padhibhodhi rako uye ugone kugadzirisa pachako maitiro aunogamuchira ako metric kuburikidza Microsoft Teams . Sefa maakaunzi aunoda kuwona, rongedza mishumo yako uye gadzira yako yambiro
Nei uchiisa Clever Ads app Microsoft Teams ?
Metric yakakosha ichave ichiwanikwa zvakananga kuburikidza Microsoft Teams . Aya metric anogona kuve ekuratidzira, kudzvanya, uye nezvimwe, zvese zvine chekuita Google Ads uye Bing Ads mishandirapamwe.
Shandisa girafu kuti nemaziso kuchengeta Kushanduka chero metrics yenyu. Ingava pamaonero, mutengo, kana kutendeuka mwero.
Ita sarudzo kugamuchira daily kana pavhiki nokupeta, ndivaite paruzhinji kuti chikwata chako kuona, kana kuti maziso ako chete.
Isu tichapa matipi ekuvandudza Google Ads zano pane chako chikumbiro. Tinogona kupa zano pamushandirapamwe wako sekushandura bhajeti raro, kushandura raanotarisana naro, nezvimwe.
Sei iwe rakatanga?
Inenge mineti, unogona kuwedzera Clever Ads Microsoft Teams akananga kuaccount yako.
Zvese zvaunoda kuti uite tinya bhatani re "Wedzera Microsoft Teams " uye uchave naro
Pinda kuchikwama chenyu mushambadziri kuti
Pinda yako Google, Facebook, uye / kana Microsoft Account kuti kwakabatana wako kushambadza nhoroondo
Sarudzai nyaya yako
Asarudza nhoroondo yako zvaaida, sununguka chinja vamwe chero panguva ipi zvayo
Kushandisa akawanda zviri Anwendung
Gamuchirai zvose mishumo ataurwa pamusoro miganhu uye nyore
Kana iwe uine mubvunzo usina kupindurwa pazasi unogona assistant@cleverads.com